Andinin-Baiboly 10 tsy tokony hohadinoinao rehefa marary ianao | HEVITRA VAVAKA
Home Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly Andinin-Baiboly 10 Tsy tokony hohadinoinao rehefa marary ianao
Andinin-Baiboly 10 Tsy tokony hohadinoinao rehefa marary ianao
Androany dia miresaka andininy 10 amin'ny Baiboly ianao izay tsy tokony hohadinoinao rehefa marary ianao. Rehefa isika marary, ny hany zavatra tonga ao an-tsainao dia ny fomba ahafahantsika mahazo fanasitranana. Ny aretina dia zavatra mahatsiravina. Indraindray dia karazana manokana fakam-panahy ary ny fitsapana tsy maintsy nandalo mpino dia tadidinao ny tantaran'i Job ?. Feno fanaintainana sy alahelo be ny aretina. Mivavaka aho mba tsy hisy marary amintsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Na izany aza, raha marary ianao dia ireto misy andinin-teny 10 tsy tokony hohadinoinao.
Misy mijaly ve eo aminareo? Avelao izy hivavaka. Misy faly ve? Avelao izy hihira fiderana. Misy marary ve eo aminareo? Avelao izy hiantso ny loholon'ny fiangonana, ary aoka izy hivavaka ho azy ka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo.
Misy fanasitranana amin'ny fiderana. Rehefa midera an'Andriamanitra isika dia ho sitrana amin'ny karazana aretina sy aretina. Tokony ho tadidinao koa fa mahomby ny vavaky ny marina. Tsy mahagaga raha mananatra ny soratra masina ny marary mba hiantso loholon'ny fiangonana, avelao izy ireo hivavaka ho azy ary hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo.
Aza hadinoina fa manala zioga ny fanesorana ny ainy. Rehefa voasazy ny lehilahy dia rava ny ziogan'ny aretina.
aza matahotra fa momba anao aho; aza matahotra, fa Izaho no Andriamanitrao; Hampahery anao aho ary hanampy anao ary hanohana anao amin'ny tanako ankavanana marina.
Indraindray rehefa marary isika dia matahotra. Indraindray tsy hitantsika izay hatao. Indrindra fa rehefa nihinana zava-mahadomelina isika ary toa tsy hiala fotsiny ny fanaintainana na ny aretina. Fantaro hatrany fa momba anao Andriamanitra na eo aza izany aretina mahatsiravina izany ary hanampy anao hiala amin'izany Izy.
Tsy haharesy anao io aretina io, rehefa tadidinao izany dia manome anao hery hiadiana amin'ilay aretina.
Ary ny vavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, ary ny Tompo hanangana azy. Ary raha nanota izy, dia havela ny helony. Noho izany, mifampiaiky heloka ianareo, ary mifampivavaha mba ho sitrana. Ny vavaky ny marina dia mahery rehefa miasa izy.
Tsarovy fa raha tsy misy finoana dia tsy azo atao ny mampifaly an'Andriamanitra. Izay handray avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa Andriamanitra Izy ary Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy. Rehefa mivavaka amin'ny finoana ianao dia ho simba ny aretina. Andriamanitra dia hamela ny ota izay miteraka aretina eo amin'ny fiainanao ary ho sitrana ianao.
Na izany aza, alohan'izany dia tsy maintsy miaiky ny fahotanao ianao. Tsarovy ny bokin'ny ohabolana milaza fa izay manafina ny fahotany tsy hambinina, fa izay miaiky heloka kosa dia hahazo famindram-po. Mibaboka ny fahotanao, mivavaha amin'ny finoana ary ho sitrana amin'izany aretina izany ianao.
Salamo 30: 2-3
Jehovah Andriamanitro ô, nitaraina taminao aho, dia nahasitrana ahy Hianao. Jehovah ô, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainan-tsi-hita ianao; namelombelona ahy indray avy amin'ireo midina any an-davaka ianao.
Ny tompo no famonjena antsika ankehitriny amin'ny andro fahoriana. Rehefa tonga amintsika ny fahasarotan'ny fiainana dia tsy tokony ho sasatra mitaraina isika fa ny famonjena antsika dia avy amin'ny Tompo. Tsarovy fa Andriamanitra dia afaka mamerina amin'ny laoniny ny fahasalamana. Aza mihazakazaka mpandeha fiaramanidina any amin'ny toerana tsy hitanao fanampiana, ento am-bavaka ny tomponao.
Salamo 103: 13-14
Tahaka ny fiantràn'ny ray ny zanany No fiantràn'i Jehovah izay matahotra Azy. Fa Izy mahalala ny toetsika; tadidiny fa vovoka isika.
Mety hanandrana hilalao haingana aminao ny devoly rehefa marary ianao. Mety hanana fahatsapana mahatsiravina ianao fa tsy ho afaka ny aretinao. Mety hiteraka tahotra tsy mahafinaritra ao am-ponao izany.
Fantaro izany ary fantaro ny fiadanana, haneho famindram-po Andriamanitra aminao. Raha toa ny raintsika etỳ an-tany manao zavatra araka ny tokony ho izy mba haneho famindram-po rehefa mila izany isika, dia toy izany koa ny raintsika any an-danitra.
Salamo 41: 3
Manohana azy eo am-pandriana marary Jehovah; amin'ny aretiny dia averinao amin'ny fahasalamana tanteraka izy.
Andriamanitra dia mpamerina amin'ny laoniny lehibe. Nilaza izy fa hamerina amin'ny laoniny ireo taona nesorin'ny cankerworm tamintsika. Toy izany koa no nampanantenany fa hamerina antsika ho salama tanteraka. Izy no mahavita manohana antsika, Izy irery no manana fahefana hamerina ny fahasalamana ary nampanantena Izy fa hanao izany. Aza matahotra fa momba anao Andriamanitra.
2 Korintiana 1: 3-4
Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindram-po sy Andriamanitry ny fampiononana rehetra, Izay mampionona antsika amin'ny fahorianay rehetra, mba hahafahanay mampionona izay rehetra misy fahantrana amin'ny fampiononana izay ny tenantsika dia ampionian'Andriamanitra.
Andriamanitra no mpampionona antsika. Izy dia manana fahaizana mampionona antsika amin'ny fotoam-pahoriantsika. Na eo aza ny fanaintainana mahatsiravina amin'ny aretina, dia hahita fiadanam-po ao amin'ny Tompo ny fonao raha afaka matoky ny tomponao ianao ary mamela ny zava-drehetra hataony.
Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinao ianareo. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako.
Tsy mila fialan-tsasatra kely ny fanahinao rehefa marary ianao. Mila zavatra hanala ny fanaintainana fotsiny ianao ary hanome anao fitsaharana. Betsaka no tsy mahatadidy akory ny fotoana farany nahitany torimaso tsara noho ny fanaintainana izay tsy ho afaka. Hoy ny soratra masina: Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa homeko fitsaharana ianao. Fantatrao izao ny toerana mety hahitana fitsaharana, mankanesa any amin'ny Tompo amin'ny vavaka.
Romana 8: 18
Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hampitahaina amin'ny voninahitra haseho antsika.
Toy ny volamena mandeha amin'ny afo ianao. Rehefa voahodina ny endrika volamena ao anatiny dia mivoaka avy ao amin'ny lafaoro izy io ho harena sarobidy. Toy izany koa Andriamanitra manomana anao zavatra lehibe. Misy fifaliana lehibe amin'ny fahafantarana fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra.
Ity fanaintainana ankehitriny ity dia tsy misy dikany raha oharina amin'ny fifaliana izay efa hiseho.
Salamo 50: 15
Antsoy aho amin'ny andro fahoriana; Hanafaka anao aho, dia hanome voninahitra ahy ianao.
Te hampiseho ny tenany ho mpanjaka mandrakariva Andriamanitra. Rehefa mijaly ianao, antsoy ny Tompo, dia ho voavonjy ianao.
Previous lahatsoratraAntony 5 Ny Kristiana tsirairay dia tsy maintsy mitory filazantsara
Next lahatsoratraAntony 5 Mila miezaka mafy hahalala bebe kokoa an'Andriamanitra ianao
Zava-bavaka 30 ho an'ny fanapahana
25 Ny vavaka dia manondro ireo fahefana amin'ny faritany
Ny herin'ny vavaka amin'ny fiainantsika andavanandro.
Febroary 7, 2019